काठमाडौं : फ्रेञ्च ब्याले डान्सर एलिजी बायनिकलाई नेपाल भन्ने देश संसारको कुन कुनामा पर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। उनले त नेपालको नामै सुनेकी थिइनन् रे!
उनी त लन्डन र पेरिसका भव्य थिएटरहरूमै रमाइरहेकी थिइन्। ओस्कार अवार्ड जित्न सफल हलिउड फिल्म ‘ब्ल्याक स्वान’ र अन्य केही फ्रेञ्च मूभीमा समेत ब्याले डान्स गरेकी एलिजीलाई कुनै दिन नेपाल पुगौंला भन्ने लागेकै थिएन।
तर, उनी अहिले नेपाल र नेपालीको मायामा यति गहिरो गरी डुबेकी छिन् कि उनलाई काठमाडौं छाडेर पेरिस फर्किने मन छैन। सोलिस पर्फमिङ आर्टस् नामक डान्स तथा थिएटर स्कुल खोलेर नेपालकै युवायुवतीलाई ब्याले, कन्टेम्पोरेरी, हिपहप र ज्याज सिकाउन व्यस्त छिन्, उनी।
एलिजी भन्छन्, ‘अहिले मलाई कसैले नेपाल र फ्रान्समध्ये कुन देशमा बस्न चाहन्छौँ भनेर सोध्यो भने म पक्कै नेपाल छान्छु। म यो देश र यहाँका मानिसको प्रेममा छु।’
सन् २०१५ मा साथी रविन श्रेष्ठसँग मिलेर सोलिस पर्फमिङ आर्ट्स खोलेकी एलिजी वान वल्र्ड थिएटरमा पनि सक्रिय छिन्। उनले काठमाडौंका विभिन्न मञ्चहरूमा ब्याले नृत्य प्रस्तुत गरी कैयौँको मन जितेकी छिन्। थुपै्र म्यूजिक भिडियो र नाटकहरूमा पनि अभिनय गरेकी छिन्।
ब्याले नृत्य गर्दा यी ३१ वर्षीया फ्रेञ्च सुन्दरी यति फुर्तिली र लचकदार देखिन्छिन् – मानौं, उनी हाड–छालाले बनेको कुनै युवती नभएर रबरको पुतली हुन्। उनका आँखाहरू पनि निकै अभिव्यक्तिशील छन्, जसले उनको नृत्यलाई झन् जीवन्त बनाउँछन्।
यसैले, एलिजीले लन्डन र पेरिसदेखि काठमाडौंसम्मका दर्शकहरूलाई लट्ठ पारेकी छिन्। काठमाडौंलाई दोस्रो घर मान्ने एलिजीले खासमा नेपाल आउने योजनै बनाएकी थिइनन्। उनी त भाइ भेट्न भारत आएकी थिइन्।
भाइ भेट्न आउनु लन्डर र पेरिसको कस्मोपोलिटन जीवनबाट केही दिन टाढा हुने बहाना पनि थियो। उनी नयाँ ठाउँ, नयाँ मानिस र नयाँ सँस्कृतिसँग घुलमिल हुन चाहन्थिन्। भारत छँदा उनले नेपालको नाम सुनिन्। र, नेपालबारे गुगल गर्न थालिन्। नेपालबारे जति पढ्न थालिन्, उनलाई उति लाग्न थाल्यो -अहो! मैले पुग्न खोजेको देश त यो पो हो।
उनले स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न काठमाडौंका केही अनाथ गृहहरूमा इमेल गर्न थालिन्। चपलीमा रहेको एक अनाथ आश्रमले तुरुन्तै इमेल फर्कायो। केही घण्टाभित्रै स्काइप वार्ता पनि भयो। त्यो अनाथ गृहले ‘आऊ’ भन्ने बित्तिकै उनले काठमाडौं जाने जहाजको टिकट काटिन्। र, एउटा झोला बोकेर त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिहालिन्।
‘हो, मेरो ताल यस्तै छ। म यसरी नै यात्रा गर्छु – हावा जस्तो,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो फ्रेञ्च नाम एलिजीकिो अर्थ हुन्छ – गर्मीमा चल्ने बेगवान हावा। म मेरो नाम झैं बेगवान हावा भई उडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुगिरहन्छु।’ एलिजी अहिलेसम्म झण्डै ३५ देश पुगिसकेकी छिन्, हावाजस्तै बत्तिँदै।
तर, कुनै एक ठाउँमा लामो समयसम्म अडिएर बस्न सक्दिनन्। नेपालमा पनि उनी बढीमा १० महिना बस्ने गरी आएकी थिइन्। तर, झण्डै ७ वर्षदेखि काठमाडौंमै थामिएकी छिन्। काठमाडौं उनलाई यति मायाबी लाग्छ कि उनी यो जादूयी दुनियाँमा हराइरहेकी छिन्। काठमाडौंका हरेक परम्परागत हस्तकला र चित्रकलामा उनी कला देख्छिन्।
र, हरेक कलामा कुनै न कुनै कथा भेट्छिन्। यसैलै उनी अहिलेसम्म काठमाडौंमै हराइरहेकी छिन्। एलिजी फ्रान्सको जुन भागमा जन्मिन्, हुर्किन्, त्यो ठाउँ साँस्कृतिक रुपले काठमाडौं झैं छ। त्यहाँ पनि काठमाडौंमा झैं विभिन्न जात्राहरू हुन्छन्। र, हरेक जात्राको सम्बन्ध देउतासँग हुन्छ। यसैले उनी काठमाडौंलाई आफू जन्मे–हुर्केकै ठाउँ सरह ठान्छिन्।
प्रायः कलाकारहरूको चाहना विश्वका ठूला मञ्चहरूमा सहभागी हुने हुन्छ। यूरोप, अमेरिकालगायत विकसित देशका कलाकारलाई विश्वकै नामी शोहरूमा प्रस्तुति दिने इच्छा हुनु स्वभाविकै हो। तर, यस्ता सम्भावनाहरूलाई बेवास्ता गर्दै एलिजी भने नेपालमा करिअर बनाइरहेकी छिन्। एलिजी बुद्ध धर्मप्रति आफ्नो झुकाव रहेको र त्यसैले आफू नेपालप्रति आकर्षिक भएको हुनसक्ने बताउँछिन्।
‘म बच्चैदेखि बुद्धिजमको प्रभावमा थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘सायद कुनै न कुनै रुपमा यो बुद्धभूमिले मलाई तान्थ्यो होला र तान्यो पनि।’ नेपाल आएर पनि उनलाई यहाँको नाँच हेर्ने रहर जाग्यो। र नेपाली नाचका बारेमा अध्ययन गर्न थालिन्। पछि उनलाई नेपाली विविधतायुक्त जात, क्षेत्र र धर्मअनुसारका नाचले झनै लोभ्याएको रहेछ।
‘म डान्सर र थिएटर आर्टिस्ट हुँ, यहाँ आएपछि पनि आफ्नै पेशाका बारेमा सोधखोज गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘बुझ्दै जाँदा मलाई यहाँको कलाकारिताले मन्त्रमुग्ध बनायो र ममा केही गर्ने सोच जन्मायो।’
एलिजीको अहिले एउटै सपना छ- नेपाली कलाकारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने। ‘नेपालीमा कलाकारिता मज्जाले जमेर बसेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर त्यसलाई अझै व्यवसायिक बनाएर कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भन्ने मात्रै चुनौती छ, म त्यसैमा लागेको छु।’
कलाकारलाई तीन ‘पी’ले परिपक्व बनाउने उनको विश्वास छः पावर, प्यासन र पोसिविलिटी। उनी आफ्नो आर्ट स्टुडियोमार्फत् कलाकारहरूलाई यही दर्शन पढाउँदैछिन्। ‘भित्रैबाट कलाकारिता ननिस्किएसम्म कलाकार बन्न सकिँदैन,’ कलाकारिताबारे उनको बुझाइ छ, ‘कलाकारिता मनैदेखि निस्किनु पर्छ।’
Published Date: Monday, 26th August 14:57:04 PM